Xoghayaha Urur-goboleedka IGAD oo kulan la yeeshay Guddiyadda Joogtada ee Wakiiladda Iyo Guurtida | FooreNews
Home wararka Xoghayaha Urur-goboleedka IGAD oo kulan la yeeshay Guddiyadda Joogtada ee Wakiiladda Iyo Guurtida
Xoghayaha Urur-goboleedka IGAD oo kulan la yeeshay Guddiyadda Joogtada ee Wakiiladda Iyo Guurtida
Hargeysa (Somaliland.Org)- Xoghayaha guud ee Urur-goboleedka IGAD Faarax Macalin oo socdaal shaqo ku jooga Hargeysa, ayaa maanta kulamo kala duwan la yeeshay Guddi hoosaadyadda Joogtada ah ee Goleyaasha Baarlamaanka Somaliland ee Wakiiladda iyo Guurtida.
Xoghayaha IGAD waxa uu uga waramay socdaalkiisa gaar ahaan mashaariicda ay iska kaashanayaan Somaliland iyo urur-goboleedka IGAD. Kuwaas oo ay ka mid yihiin waxbarashada, xanaanada xoolaha iyo xakamaynta xanuunka HIV/AIDS-ka.
Maxbuub Macalin waxa uu sheegay inay urur goboleedka IGAD danaynayaan inay Somaliland wax kala qabtaan mashaariic salka ku haya horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin Biyaha,laydhka iyo wadooyinka.
Xoghayuhu wuxuu sheegay inuu Somaliland ka rajaynayo inay ururkooda kala shaqayso sidii wadamada gobolku u yeelan lahaayeen iskaashi balaadhan.
Sidoo kale, Gudidda Joogtada ee Goleyaasha Guurtida iyo Wakiiladda Somaliland ayaa weftiga Xoghayaha uga waramay xaalada guud ee Somaliland ee dhinacyada Nabadgelyadda, siyaasada iyo adeegyada bulshadda.
Weftigan Xoghayaha urur-goboleedka IGAD waxa kale oo ay kulamo la yeelan doonaan wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland oo uu kala hadli doono mashaariicda ay iska Kaashanayaan labada dhinac.
Previous PostNatiijadii kulan Shan urur siyaasadeed Hargeysa ku yeesheen Next PostXukuumadda oo sheegtay inaanay aqbalayn in shirka Teleex ay ka soo baxdo wax lidi ku ah Somaliland